PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - Isikhulu sikamasipala siyesatshiswa
Isikhulu sikamasipala siyesatshiswa
Sivundulule inkohlakalo ka-R8 million eRichmond
SIHLAFUNA sijeqeza kuhle kwenyamazane isikhulu sikaMasipala waseRichmond - ophethwe yi-ANC - esivundulule inkohlakalo ka-R8 million okhokhelwe inkampani ebiyoqedela umsebenzi oshiywe ngenye ngoba kuthiwa kayenzi kahle.
Kuthiwa le nkampani eyekisiwe ikhokhelwe u-R8 million ngomsebenzi ewenzile, nalena yesibili yakhokhelwa imali efanayo emuva kokufaka i- invoice ehlanganisa nomsebenzi owenziwe yile nkampani eyekisiwe - okuyimanje lo msebe- nzi kawuqediwe.
Imithombo yaleli phephandaba ilivezele amaphepha awubufakazi obukhombisa o-R8 million abakhokhelwe lezi zinkampani okuthiwa bezifaka ugesi.
“Ngonyaka odlule kumiswe inkampani ebifaka ugesi, umsebenzi usuya ngasemaphethelweni. Kunikwe enye inkampani umsebenzi yakhokhelwa imali elingana nebikhokhelwe le nkampani ebingawuqedanga umsebenzi.
“Okunye okushayise ngamakhala wukuthi le nkampani entsha ifake i- invoice yabala nomsebenzi obusuvele sewenziwe yile eyekisiwe, yakhokhelwa,” kusho umtho- mbo.
Ngokuthola kweLANGA, kunanoR2.5 million ophume esikhwameni sikamasipala ngaphandle kwemvume yomkhandlu. Lesi sikhulu esisatshiswayo - esiligodlile igama laso ngenxa yezokuphepha - kuthiwa sithole ucingo ngoLwesibili olwedlule luthi sivimbile kulesi sikhundla esikusona.
Sikhuluma neLANGA lesi sikhulu, sithe sithole ucingo obeluvela kowesilisa ozibize ngoBhodloza, othe uthunywe ukuba enze uphenyo ngempilo yaso.
“Ngiyiphendulile imibuzo abengibuza yona, wangitshela ukuthi njengoba ngikulesi sikhundla ngi- vimbile,” kusho lesi sikhulu.
Phakathi kwenkohlakalo evundululwe yilesi sikhulu - esale saphetha ukucacisa ukuthi le nkohlakalo yenzeke kanjani - kubalwa ukusetshenziswa kukaR10.8 million okuthiwa uphume ngokungemthetho.
“Lokho kudingeke ukuba ngikubike emkhandlwini kamasipala, okuyiwona okufanele uthathe izinyathelo nokuthi uzolusingatha kanjani lolu daba,” kusho yena.
Sithe kasazi noma kuhlangene yini nokuvundulula kwaso le nkohlakalo lokho okwenzeke ngoLwesibili.
Usomlomo kulo masipala, uMnu Samora Ndlovu, uthe kuliqiniso ukuthi njengomkhandlu bathole umbiko oshaqisayo ngokumoshwa kwemali elinganiselwa ku-R10.8 million abangazi ukuthi iphume kanjani ngoba kuze kube yimanje lo gesi okuthiwa ubufakwa kawukakhanyi.
“Yingakho ngoLwesithathu sin- qume ukuthi kufike abacwaningimabhuku kulo masipala ukuba bazobheka ukuthi le mali iphume kanjani nokuthi ngobani laba abagila le mikhuba. Isifiso sethu wukuba bonke ababandakanyekayo baboshwe, ngisho kuthiwa labo abathintekayo bangamalungu omkhandlu kuyomele bashone ejele,” kusho uMnu Ndlovu.
Uvumile futhi ukuthi njengomasipala babikelwe ngodaba lokusatshiswa kwesikhulu esithile, bazolusukumela ngokushesha.
UMnu Lennox Mabaso, okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, unxuse abezomthetho ukuba bangenelele ezimeni ezinjengalezi, wathi lo masipala kumele ugawule ubheke, ulungise izindaba zawo ngokukhulu ukushesha.
Okhulumela amaphoyisa, uCol Thembeka Mbhele, uthe likhona icala lokusabisa elivuliwe.